Puntland oo ku biirtay baaqyada abaarta Soomaaliya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Puntland oo ku biirtay baaqyada abaarta Soomaaliya
Puntland oo ku biirtay baaqyada abaarta Soomaaliya
Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kaga dhawaaqay magaalada Garoowe jiritaanka xaalad abaareed oo haysata dadka ku nool gobolladda maammulkaasi qaarkood kaddib shir jaraa’id oo uu kula hadlayay warbaahinta.
Puntland ayuu sheegay madaxweynuhu inay sii qaadi doonto jawaab degdeg ah oo loogu gurmanayo dadka ay abaartu saameysay, isaga oo sidoo kale ku booriyay ganacsatada, iyo bulshada waxtarka u leh dawladda Puntland inay kaalintooda ka qaataan hawlahaasi socda.
Dhinaca kale Prof. Gaas, wuxuu ugu baaqey hey’addaha samafalka caalamiga ah iyo Qaramadda Midoobay inay gacan ka geystaan gurmadka loogu jiro samatabixinta dhibanayaasha abaarta ee reer Puntland iyo guud ahaan waddanka Soomaaliya.
Goor sii horreysay dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa Muqdisho kaga dhawaaqay in abaari ku dhufatay toddobo gobol waxayna kasii digeen suurogelnimada inay dhacdo mid la mid ah tii sannadkii 2011-kii, taasoo galaafatay nolosha 260,000 oo qof oo kala barkood ahaa carruur, haddii aan la qaadin tallaabooyin looga hortagayo abaarta.
Previous articleAddis Ababa oo lagu gaaray dib u dejinta qaxootiga Soomaaliya
Next articleKenya: Xasan Xanafi oo xiran